Torolàlana ho an'ireo karazana sy fitaovana hanombohana mamorona fampianarana video an-tserasera | Martech Zone
Alahady 11 aprily 2021 Alakamisy, Desambra 30, 2021 Hritusharma
Raha te-hianatra lesona an-tserasera na fampianarana video ianao ary mila lisitra mora ampiasaina amin'ireo fitaovana sy paikady tsara indrindra, dia ho tianao ity torolàlana farany ity. Nandritra izay volana maro lasa izay dia nandinika manokana sy nanandrana fitaovana, fitaovana ary toro-hevitra maro aho hamoronana tutorial sy horonan-tsary mahomby amidy amin'ny Internet. Ary izao dia azonao atao ny manivana ity lisitra ity hahitanao haingana izay ilainao indrindra (misy zavatra ho an'ny teti-bola rehetra) ary avy hatrany dia maika hamokatra ny làlanao manaraka.
Topazo maso, atombohy amin'ilay iray izay manome aingam-panahy indrindra ary vakio manontolo satria nanomana zavatra tena manokana ho anao aho, ary tiako ho azo antoka fa tsy ho diso anjara ianao na inona na inona antony.
Mpanoratra horonantsary an-tserasera
Ny karazana horonan-tsary voalohany tianao hamboarina ho an'ny làlam-pianaranao na ny fampianarana anao dia ny fampisehoana izay hitanao eo amin'ny efijery amin'ny solosainao (sary, programa na tranokala) ary maneho hevitra momba izany amin'ny audio. Raha ny lafiny teknika dia izany no mitaky fampiasam-bola kely indrindra, fa ny loza mety hitranga dia raha toa ianao manao tahaka ny ankamaroan'ny olona hitako ao amin'ny YouTube dia mamorona horonantsary mankaleo mahafaty ianao izay tsy ho hitan'olona intsony.
Izany no antony maha-zava-dehibe azy:
Tandremo ny fanatanterahana ireo slide
Miasà betsaka amin'ny fampiasana ny feonao
Ampidiro ny sarimiaina sy ny vokatra manokana
Manaova fanapahana tsy misy habibiana amin'ireo faritra tapaka tsy ilaina
Hatramin'izao ny rindrambaiko mora indrindra sy feno indrindra ampiasaina amin'ny vao manomboka. RecordCast Screen Recorder dia intuitive, manan-karena endri-javatra, ary 100% maimaim-poana. Na inona na inona ampiasainao PC na Mac, azonao fehezina tsara amin'ny solo-sainao izany satria miorina amin'ny tranokala. Na dia maimaim-poana aza dia rakipeo tsy misy mari-drano, tsy misy doka, ary famaritana avo lenta. Tsy mety tsy hita ao amin'ny boaty fanampianao. Ho fanampin'izany, manolotra mpamoaka horonantsary natsangana miaraka amina tranomboky misy singa maro, lahatsoratra, sarimiaina, overlay, tetezamita, ary endri-javatra fanovana miovaova be toa ny fisarahana, zoom in / out, notapahana sns. ireo izay te-hamorona fampianarana video na fampianarana tsotra.
Midira maimaim-poana amin'ny RecordCast
haraka dia mety raha te-hamorona horonantsary haingana ianao, indrindra amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny tranokala na rindrambaiko. Io dia ahafahanao mirakitra ny tenanao rehefa miteny ianao, manome torolàlana ary mampiseho anao faribolana kanto azonao apetraka amin'izay hitanao fa mety. Tena ilaina ihany koa amin'ny fizarana fanehoan-kevitra amin'ny video haingana amin'ireo mpiara-miasa na mpanjifanao. Maimaimpoana ny kaonty fototra ary manana tolotra orinasa sy orinasa koa izy ireo.
Midira maimaim-poana amin'ny Loom
Raha mampiasa fitaovana Apple ianao, Sreenflow no vahaolana ilainao: firaketana fampianarana tsara sy fanovana horonantsary semi-matihanina. Na eo aza ireo endri-javatra mandroso ireo, dia tena tsotra sy mora ampiasaina izy io, ary manana sivan-tsofina sy horonantsary tsara, ary tsara ny vokany. Ny lisansa indray mandeha dia manomboka amin'ny $ 129.
Sintomy ny fitsapana ny fizotran-tsary
Mikrô ho an'ny feo kalitao
Ny BOYA BY-M1 dia mikropono clip omnidirectional, mety tsara amin'ny fampiasana video, natao ho an'ny smartphone, fakantsary reflex, fakan-tsarimihetsika, horonam-peo, PC, sns. Ny flap dia manana mikrô polar omnidirectional ho an'ny fandrakofana 360-degree. Izy io dia manana tariby maharitra 6 metatra (miaraka amina jack 3.5 mm amin'ny volamena) mba hifandraisana mora amin'ny fakan-tsarimihetsika, na smartphone napetraka tsy lavitra ny mpandahateny. Vidiny: $ 14.95
The Sennheiser PC 8 USB soso-kevitra raha toa ka mihodinkodina be ianao ary mila manoratra (indrindra ny screencast) amin'ny tontolo misy tabataba azo antoka. Mazava be izy io ary manome feo tsara ho an'ny rakipeo sy mozika; ny mikrô, manakaiky ny vava, dia mora tohina sy mazava amin'ny famoahana ny feo miaraka amin'ny fanakanana ny tabataba manodidina. Vita amin'ny moana ary ny fifehezana volume amin'ny tariby, azo ampiharina ihany koa amin'ny fepetra miasa mahira-tsaina. Mazava ho azy fa tsy azo ampiasaina afa-tsy ny mampifandray amin'ny PC / Mac fa tsy amin'ny smartphone na fakan-tsary ivelany. Vidiny: $ 25.02
The Rode VideoMic Rycote dia microphone barika basy izay mamela azy handraisana feo amina làlan-kaleha nefa tsy misy feo am-peo akory. Izy io, noho izany, ny safidy tsy maintsy atao amin'ny tifitra OUTDOOR izay mihetsiketsika matetika ny lohahevitra, miova matetika (ohatra, rehefa manana mpandahateny 2/3 ianao) na ny fampiasana microphone lavalier dia tsy ampirisihina noho ny antony hatsarana. Azo apetraka mora foana amin'ny fakan-tsary SLR izy io, ary miaraka amin'ireo adaptatera finday avo lenta, azonao ampifandraisina amin'ny telefaona na takelaka ho an'ny firaketana ambany karama ihany koa izany. Vidiny: $ 149.00
OpenShot dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana mifanaraka amin'ny Linux, Mac, ary Windows. Haingana ny mianatra ary mahery tampoka. Izy io dia manome anao ireo fiasa fototra amin'ny fanaovana fanapahana sy fanitsiana ny horonan-tsarinao, ary koa ny làlana tsy voafetra, ny effets manokana, ny fiovana, ny mihetsika miadana ary ny sarimiaina 3D. Manoro hevitra raha manomboka amin'ny rangotra ianao ary mitady zavatra mora vidy sy haingana hianarana.
Sintomy ny OpenShot
Rindrambaiko miorina amin'ny Internet sy ny navigateur tanteraka izany. FlexClip Video Editor dia miaraka amin'ireo fiasa rehetra ilainao hamoronana horonantsary mahafinaritra, tsy mila traikefa ilaina. Amboary mivantana ny horonan-tsary amin'ny habe rehetra amin'ny browser fa tsy manahirana ny fampakaram-bady tsy manelingelina. Lany hevitra? Topazo maso ny galeraly ny maodely video namboarina tanteraka namboarin'ireo matihanina namboarina tamin'ny orinasao. Nieritreritra ny olon-drehetra izy ireo: manomboka amin'ny horonan-tsary ho an'ny fantsonao YouTube ka hatramin'ny horonantsary fanabeazana na fanofanana. Tsara raha te hanao fitsapana haingana ianao.
Vidiny: freemium (fanondranana maimaim-poana amin'ny 480p fotsiny, avy eo amin'ny 8.99 $ / volana); Mety handeha ianao AppSumo hahazoana ny kinovan'ny fiainany amin'ity indray mitoraka ity.
Midira ho an'ny FlexClip
Shotcut rindrambaiko maimaimpoana, azo tanterahina amin'ny Linux, macOS, ary Windows, loharano maimaimpoana sy loharano misokatra, ahafahanao mamorona horonan-tsary, mitantana ary manondrana azy ireo amin'ny endrika maro. Ny interface dia malefaka sy intuitive. Milamina tsara ny baiko, misy sivana sy tetezamita maro azo ampiharina. Miovaova arakaraka, misy curve fianarana tsara ary mora ampiasaina. Fanavaozana matetika, fampidirana ireo fampiasa sy fampiasa vaovao, manatsara hatrany ny zava-bitany.
Manolotra endri-javatra feno setroka toy ny rindrambaiko ara-barotra. Izy io dia manohana endrika maro miaraka amin'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 4K. Manome fanaraha-maso mandroso ho an'ny horonan-tsary sy horonam-peo, effets, fandaharam-potoana miaraka amina fanovana multitrack, ary fanondranana manokana miaraka amina profil efa voafaritra mialoha.
Ampidino ny Shotcut
Aiza no hamoahana ny horonan-tsarinao amin'ny Internet
Rehefa namorona ny horonan-tsarinao ianao tamin'ny farany dia tonga ny fotoana anaovanao azy ireo ho an'ny mpihaino anao ary "ampifandraiso" amin'ny vavahady (izay hodinihintsika amin'ny fizarana manaraka) izay anoloranao ny làlan-tsarinao. Avy eo andao hojerentsika hoe aiza no ahafahantsika mamoaka ny fianarantsika an-tserasera.
YouTube - Tsy mila fampidirana izany satria io no sehatra voalohany eo amin'ny tontolon'ny horonan-tsary. Izy io dia manana interface tsotra, manome anao statisty sarimihetsika tsara, ary ny tsara indrindra, maimaim-poana 100% izany. Izy io, noho izany, dia vahaolana mety indrindra raha tsy manana teti-bola hampanjarianao vola ianao na te hamoaka horonantsary haingana. Ny lafy ratsy dia ny fametrahana doka amin'ny horonan-tsarinao YouTube, ary azo antoka fa tsy manampy amin'ny famoronana sary matihanina izany (ary mety hitarika fifamoivoizana amin'ireo mpifaninana aminao aza). Raha fintinina: ampiasao ihany izany raha tsy manana safidy hafa ianao na raha te-hanamboatra fantsona YouTube hampiasaina hampitomboana ny mpihaino anao amin'ny fomba voajanahary. Maimaimpoana ny vidiny.
Vimeo - Io no safidy # 1 an'ny YouTube satria, raha mampiasa vola kely dia manome safidy hanamboarana toerana maro (indrindra ny fiainana manokana), manova ny toerana misy ny horonan-tsary sasany ao anaty vondrona iray, ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy mampiseho doka izany. Mora be ny manamboatra sy mitantana. Vahaolana mety indrindra izany raha tsy manome anao fampiantranoana maimaimpoana maimaimpoana ny sehatra fandefasana fampianarana anao, koa satria (toa ny YouTube) dia manatsara ny kalitao arakaraka ny fantsom-pifandraisana sy ny fitaovana ampiasainao. Vidiny: maimaim-poana (drafitra stratejika manomboka amin'ny $ 7 / volana atolotra)
Manomboha manao ny dianao izao!
Raha nankafizinao ity torolàlana lalina ity ho an'ny fitaovana lehibe rehetra hamoronana fampianarana an-tserasera mahomby (ary tena manampy ny mpihaino anao izany), aparitaho. Aza miandry intsony. Andramo mamorona fandaharam-pianarana video an-tserasera anio.
Disclosure: Martech Zone dia mampiasa rohy afiliana mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: flexclipmikrô headsetmikrofona lavalierharakaonline courseonline trainingfampianarana video an-tseraserafitaovana fanofanana horonantsary an-tseraseraopenshotfiraketanascreen recorderfitetezana sarysennheisernitifitramikrô slrlahatsary fanitsianarindrambaiko fanovana horonantsarympamoaka horonantsarymikrô videompitam-bokyVideo fiofananaVimeoYouTube
Hritusharma dia bilaogera tsy miankina iray, manampahaizana manokana amin'ny fampiharana teknolojia famolavolana sy famolavolana. Vonona ny hanampy ny olon-drehetra izy mba ho tonga mpamorona toa ny pro. Ankoatra ny maha-junkie teknolojia azy i Hritusharma dia tia manao sary sy sary.
JSON Viewer: Fitaovana maimaim-poana handinihana sy hijerena ny fivoahan'ny JSON an'ny API anao